Milatari loo dhaariyey Difaaca dalka kaddib dhammaadka tababarkooda. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Milatari loo dhaariyey Difaaca dalka kaddib dhammaadka tababarkooda.
Milatari loo dhaariyey Difaaca dalka kaddib dhammaadka tababarkooda.
Waa 138 ciidammadan loo dhaariyey in ay si daacadnimo leh ugu adeeggaan dadkooda, u difaacaan uguna shaqeeyaan Calankooda Soomaaliyeed sharaftiisa, dhaarinta waxaa joogey abaalduulaha ciidanka Xoogga dalka Soomaliyeed General Cabdullaahi Cali Caanood, saraakiisha ugu sarreysa xeradan Turky-SOM iyo Danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya.
Previous articleMaamulka Galmudug oo kulamo nabadeed la qaatay Odayaasha Caabudwaaq.